IKhaya le-3BR elimangalisayo kwiLake Lake w/Iveranda ebanzi - I-Airbnb
IKhaya le-3BR elimangalisayo kwiLake Lake w/Iveranda ebanzi
UEvolve unezimvo eziyi-2695 zezinye iindawo.
Baleka kuphithizela kubomi bemihla ngemihla ngokuhlala kule ndlu inoxolo 3-igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela eli-2 laseSpring Lake ikhaya elinegumbi lokuhlalisa iindwendwe ezisi-8. Ibekwe kanye ecaleni kweLake Lake, uya kuyonwabela indawo engakholelekiyo eselunxwemeni, kunye nemibono entle kanye ukusuka kwiveranda yale ndawo! Xa ungekho echibini, yonwabele ukuloba okukumgangatho wehlabathi, ukukhwela intaba, kunye nokuzingela kwihlathi leSizwe laseChippewa, elingqonge ipropathi!
Igumbi lokulala elikhulu: Ibhedi yenkosi | Igumbi lokulala 2: Ibhedi yenkosi, iSofa yokulala | Igumbi lokulala 3: Ibhedi egcweleyo | Isiseko: Futon epheleleyo
Ukuchukumisa okufana nekhabhinethi kubonakaliswe kuyo yonke indawo eyi-2,500 yesikweri seenyawo ezibekwe kakuhle ngokungena kwi-intanethi engenazingcingo, oko kuyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokukhetha usapho okanye iqela labahlobo abasenyongweni ekukhangeleni i-quintessential Minnesota lake retreat.
Indawo engaphakathi ephangaleleyo inefanitshala ethandekayo, ukuhonjiswa kwentaba okunencasa, kunye nobugcisa obumnandi. Hlangana nabantu ohamba nabo kwindawo yokuhlala epholileyo, egcwele indawo yomlilo yamatye.
Thatha ithuba elipheleleyo lepropathi enkulu eyenziwe ngamaplanga, enoluhlu lweenketho zefenitshala yepatio kunye nembono engoyiswayo. Chitha iingokuhlwa zakho kwindawo enkulu engaphandle ecaleni komlilo!
Ichibi eliziihektare ezingama-4,300 libonisa ubuhle obungenakuthelekiswa nanto, kunye nendawo ekhethekileyo yokuhlala esiqithini kunye neentlobo ezininzi zeentlanzi ezinomdla. Relax ekuzoleni kwentlango yaseChippewa National Forest ebukekayo ekufutshane nawe, mhlawumbi ude ubambe ikroba lexhama elibaleka eyadini.
Ukongeza, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo liza nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ekutyeni okuphekwe ekhaya.
Phelisa ubusuku ngokubuyela kwenye yeebhedi zekhaya ezifana nelifu ukuze uphumle kusuku olulandelayo oluneziganeko.
Ibekwe kumgama oziimitha ezingama-600 elunxwemeni lweSand Lake, uya kuba nentaphane yezinto ezinomtsalane onokuthi ufikeleleke kuzo, kubandakanya ukuqubha okumangalisayo, ukukhwela isikhephe, ukuloba, kunye nokuphumla elunxwemeni.
Emva kokubamba isixa esikufaneleyo ukudunyiswa, sebenzisa eyona ndlu intle yokucoca iintlanzi ukulungiselela ukubambisa kwakho isidlo.
Ihlathi leSizwe laseChippewa libonelela ngeetoni zokuhamba intaba kunye neminye imisebenzi yangaphandle, yonwatyelwa lula liqela lonke.
Qhuba ungene kwidolophu enomtsalane ukudibana nokutya okumangalisayo, igalufa, kunye nembonakalo entle kwiipaki ezikufutshane.
Ukuba ujonge ukurenta isikhephe, iGrand Rapids Marine imalunga neyure nje enye.
Nokuba ukhetha ukwenza njani na ixesha lakho apha, eli khaya lihle kakhulu lokurenta iholide lase-Spring Lake ngokuqinisekileyo aliyi kudanisa!